Isimo samapolisa sibi kakhulu kune-Nazi yaseJamani esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Novemba 2019	• 21 Comments
Sisendleleni eya kwisimo samapolisa apho siza kuqala sinyanzelise umthetho ngokusebenza, kwaye ke siwulungelelanise nomthetho ngokufanelekileyo. Abanye abameli be-PsyOp bathuthela kwelinye icala letafile emva komsebenzi wokubambisana ekusebenzeni kwengqondo (njengomkhuseli wabadlali ababevunyelwe ukufaka isandla kumthetho omtsha) kwaye babe ngumgwebi we-PsyOp. Ezo jaji zinomsebenzi wokumisela umthetho omtsha wamatyala, onokuthi emva koko wenziwe umthetho.
U-Bart Stapert ngu ngumzekelo olungileyo ukusuka kwigqwetha elinjalo elivunyelweyo ukuba lincedise umntu owayephule umthetho ukuba abe lingqina lesithsaba kwaye ngoku angagweba abantu njengejaji. Omnye wabathengi bakhe bokugqibela wayelingqina elinguNabil B., owayekhutshiwe njengobhuti wakhe kwi-2018 (ngokwebali lephepha). UNabil B. wayengungqina ophambili kulingo malunga nelizwe leziyobisi eAmsterdam. Ilizwe leziyobisi onokuthi ulithelekise nendlela i-US eyayiseke ngayo, yaqeqesha kwaye ixhobile iAl Qaeda, kunye nendlela iSyria kunye nezinye iimfazwe ezininzi ezisebenze ngayo kunye nemikhosi yommeli ukumisa ilizwe ukudala i-alibi yokungenelela kanzima. Ilizwe leziyobisi laseAmsterdam, elibizwa ngokuba yiMocro Mafia, ikwangumkhosi ozimelelayo ozenzele wona. IAmsterdam Mocro Mafia yi-IS ye-AIVD; Umkhosi wenkululeko welizwe laseDatshi, ukwazisa amanyathelo amatsha kazwelonke. Dala isiphithiphithi ngokwakho, ukuze ungenelele kanzima.
Ulwaphulo-mthetho lwe-proxy Mocro-mafia lubonakala ngathi kufuneka lusebenze ukuqinisekisa ukuba umoyaniso wamapolisa othusayo obizwa ngokuba 'lingqina lesithsaba' wamkelwe ngumntu wonke. Ubukho bemigaqo yobungqina besithsaba iqinisekisa ukuba urhulumente angenza ubungqina obucwangcisiweyo ngalo lonke ulwaphulo mthetho. Ingqina elihlinzekelwe oku linokupheliswa lingaziwa. Umsebenzi obambeleyo uya kwenziwa kude kuthi ga ngoku igama lengqina lingaphumi, kungenjalo amalungu osapho kunye namagqwetha aya kubulawa. Emva koko unokufumana wonke umntu ongasemva kwebar ene-proof-up enobungqina obungaziwayo.
Imalunga nomgca osezantsi ukusuka apho uthunyelwe khona ngoku. Awufuni kuyibona loo nto? Emva koko intloko yakho isesanti. Lo mgaqo wobungqina besithsaba wawusele unyanzelwe ngumbambisi wolwaphulo-mthetho, uWillem Holleeder, kodwa umsebenzi obambeleyo kufuneka wonyuswe ngokukuko kangangokuba ubugqwetha ngokwawo buzokukholelwa kuwo. Ngaphezu koko, ukuba ufuna ngenene ukushenxisa abantu ngexabiso eliphantsi nangokulula, awufuni ukubeka kuzo zonke iinkqubo zokukhusela ezibiza kakhulu. Kukhethwa ke ngoko ukwamkela ukuba ingqina lesithsaba liya kuhlala lingaziwa kuyo yonke inkqubo. Ukuba iyasilela ukugqiba, cofa nje ukhuphele ezo nkqubo zokukhusela zibiza imali eninzi embizeni yerhafu. Kwaye sicinga nje malunga nokuzivalela izaphuli-mthetho eziyingozi. Hayi, inokwenzeka izaphuli mthetho abathathe inxaxheba kwiskripthi sefilimu sokusebenza kwengqondo (PsyOp).
Kwisenzo esinye (njengoko kuchaziwe ku nqaku yam yangaphambili) Okwangoku, isibonelelo semali yezokhuselo (yabo urhulumente ufuna ukushenxisa) nayo kufuneka itshintshiwe. Konke kuxabisa imali eninzi kakhulu kubantu abanjengoWillem Holleeder. Yonke loo nto yenzekile 'ukongeza' kwaye ke iintlawulo zegqwetha zazihlawulwa ngurhulumente. Ewe yayiyinjongo ngqo leyo yokwenza isenzo solwaphulo-mthetho. Kwakufuneka ixabise kakhulu, ukuze urhulumente akwazi ukuthi:Ayisekho loo nto. Singayisebenzisa bhetele imali ukukhusela iinkqubo zokungqongwa kwesithsaba okanye igqwetha lakhe".
Ngamafutshane, yonke indawo yenzelwa ukutshixa yonke into kwaye wonke umntu urhulumente angabeka ulwaphulo-mthetho kuye izihlangu. Ayifanelanga ukuba lolwaphulo-mthetho olungekhoyo, kuba akusafuneki unikezele ngobungqina obuxhasayo ukuba ngaba unengqina lesithsaba. I-NFI ingabhala ingxelo ehleliweyo kwaye ingqina lesithsaba licwangcisa isigwebo esityunjelwe njenge-nibble entle yombuso. Emva koko unokumamela lonke ulwaphulo-mthetho kunye nengqina ngaphandle kwengubo yakho, kuba yonke into ihamba ngokungaziwa kunye nasemva kweengcango ezivaliweyo. Ukuqala kwesimo esoyikisayo samapolisa! Kodwa akuphelelanga apho.
Kuthekani ngokuphelisa ukungavisisani noluntu ngokuthi ubasebenzise ngengqondo? Ndiyichazile ngokweenkcukacha ngaphakathi eli nqaku. Kubalulekile ukuba uyifunde ngononophelo kwaye uyingenise. Kungenxa yokuba unokuba uyazichaphazela namhlanje okanye ngomso. Inokuchukumisa; inokuchaphazela abantwana bakho. Imalunga nokuvalelwa kokujongwa kwimeko yeengcinga ezinokubaphambuka ezichazwe njengokuziphatha okunokudideka. I-Ruinerwold 'ghost yosapho' PsyOp isebenze le. Funda lonke inqaku kunye nezimvo kwakhona ucofa ikhonkco.
Sibona imigangatho ivalwa kuzo zonke iintlobo zeefonti. Iinkqubo zokugonya ngokuthe ngcembe ziba ngumthetho. I-5G iyeza. Ewe sibona ukuxhathisa kuyo yonke imigca, kodwa kubalulekile ukuba ngoku uyabona ukuba phantse yonke loo nkcaso ilungiswe ngurhulumente ngokwayo, ukuze ayihambise. Uninzi loqhanqalazo lujolise kwiinkokeli zopolitiko, kodwa ezo nkokheli zopolitiko zikho kuphela ngeenjongo ze-1 yile: tyhala yonke into ngololiwe okhawulezayo.
Isizathu sokumelana nokuzilungiselela, kwelinye icala, ukufihla iingxaki zokwenyani ngokutshintsha ingqalelo kwaye sihlala siqinisekisa ukuba izinto aziphumi ngesandla. Imalunga nokuxhathisa kwabantu Ukuba ungazithumela ngokwakho, unokuthumela inqanawa elunxwemeni. Kwam incwadi entsha Ndicacisa ukuba le nkcaso ilawulwayo isebenza njani kunye nendlela zonke izakhelo zenkohliso ezakhiwe ngayo. Kubaluleke kakhulu ukuba le ngcaciso ikhutshwe namhlanje. Lixesha lokuba uthathe inyathelo ngokwakho kwaye ubeke incwadi leyo nosapho lwakho, abantu obaqhelileyo okanye nabahlobo. Asinakulinda kwakhona. Amasango elizwe lamapolisa ayavala kwaye yonke le nto yenzeka kwijean enobuhlobo 'yokunakekelwa' kunye 'noncedo'.
Ifilimu yasasaza ngezantsi ibonisa indlela iinkampu zoxinaniso (ngoku ezityebileyo eNetherlands) ezinikwe ngayo inkathalo enothando. Ukucoceka ngokucocekileyo, kunika ingcinga yokuba konke konke akulutshatho kwaye nothando. Uyimisa kunye nabadlali kunye nokukhanya okuhle kweengcingo zakho zentolongo kunye nemveliso emnandi yendoda elungileyo-emnyama. (Jonga kwaye ufunde ngakumbi phantsi kwevidiyo)
Inkqubo "ye-40 /" ye-45 yayifuneka ukubonisa uhlangothi olunzima lwe-fascism. Emva kwaloo mfazwe, ibhloko yamandla eyanceda kunye nokuxhasa u-Adolf Hitler yaqhubeka nje neqela le-jpgberg, elalimiselwa yinkosana yethu uBernhard. UHitler wayevunyelwe ukuba asebenze kakuhle kwangaphambili ukuze akwazi ukucoca intsimi kwakhona njengoko kucwangcisiwe, ukuze intsimi efanayo yamandla emva kokuphakama kwakhe nokuwa inokupakisha imigaqo-siseko efanayo esisiseko yedemokhrasi kunye nedyasi. Indlela eya kuloo mmandla ubalaseleyo we-EU yasebenza ngaphandle kwezo ntlanganiso zokuqala ze-jpg.
Sele kudlule amashumi eminyaka, kodwa iinkampu zoxinaniso kunye nezifundo zikulungele ukugcwaliswa ngomkhamo omkhulu kuye nabani na ongavumelaniyo nezimvo zenkolelo. Abo kungekudala baya kuba bonke abo bantu banxulunyaniswa ne-brand elungileyo (isiNgesi: 'iphiko lasekunene') ngocwangco lwendalo ebunjiweyo kwaye banxulunyaniswa neenkokheli zezopolitiko ezenze umqondiso. In eli nqaku Ndicacisa indlela oludibana ngayo noDonald Trump, uBoris Johnsen kunye (naseNetherlands) kwezopolitiko ezifana noTierry Baudet. Kwam incwadi entsha Ndiya kucacisa kule nto. Ngokudala ukuqubuka kwezoqoqosho kungekudala kwaye udale isiphithiphithi, unokujongana nelo qela lonke kwi1x. Ukususela ngoku, ukucinga ngokuqatha yinto efuna ukuphinda imfundo. Emva koko unokuba nesiphazamiso kwi-Inshurensi ye-Inshurensi yoKhuseleko. Ewe, nyani! Inkcazo yolu "phazamiso" sele iseluliwe. I Ii-psycholances sele zilapho ilungile.
Lixesha lokuba ubone ukuba kwenzeka ntoni ngakuwe. Yonke imithetho kunye nemigaqo ayikho apho ukukukhusela, kodwa ukukhusela i-supercate evuthayo (ngengubo emnandi: ingcuka kwiimpahla zeegusha) ngokuchasene nawe; ngokuchasene nabantu. Abantu bathathe ixesha lokuqeqesha izizukulwane 'zabakhathaleli' kunye 'namapolisa'. Emva kwayo yonke loo nto, abo banolutsha banekamva kwaye ukuba uqala ukusebenzisa ingqondo ngokukhawuleza, ungabeka phantsi yonke imikhosi 'yabakhathaleli' kunye 'neearhente' abaqinisekile ukuba kufanelekile ukubavalela bonke abantu. Kukho ubumfama ngokudibeneyo njengesiphumo samashumi eminyaka senkqubo, imfundo, amajelo eendaba kunye nokuthatha inxaxheba kwezopolitiko. Lixesha lokuba ubone kuzo zonke iindlela zokukhohlisa. Ndifuna ukukubiza ngokungxamisekileyo, incwadi yam ukufunda nokunika kude kusapho, kubahlobo okanye kubalingane. Kwiphepha kunye nephepha kunqabile ukuba i-censor kune-intanethi.
Ekugqibeleni ividiyo engezantsi. Kuyo ubona enye yeengcingo ezininzi ezakhiwe yiYurophu ukuzikhusela kubo bonke abahlaseli. Ndicebisa ukuba ujonge ividiyo efanelekileyo apha ngezantsi kwaye ke uzibuze ukuba ngaba iya kuza imini xa kufuneka ubaleke ulawulo lwe-fascist, kodwa ungayi ndawo, kuba Zonke ezo zinto zibiyelwe apho kwaye zonke iilwandle zibekwe esweni ngeenqanawa zokugada unxweme, iidrophoni kunye neehelikopta. Ngaba uza kusebenzisana ukuba i-psycholance iza ngaphambili? Ngaba uyakuwuthatha umxube wepilisi olungiselelwe kakuhle ngaphambi kokuba ufumane isidlo sasemini ngomnyango wesisele? Okanye ucinga ukuba ayizukuhamba ngokukhawuleza?
Uluhlu lonxibelelwano lomthombo: https: nporadio1.nl
tags: advocaat, Bart, germany, EU, eziziimbalasane, ukubiyela, uncedo, ubungqina besithsaba, UNabil B., nazi, Ingqondo, I-Stapert, ukunakekela
Chekinah wabhala wathi:
14 Novemba 2019 kwi-10: 53
Cacisa inqaku kwakhona uMartin, uvelwano ukuba abantu abaninzi ababoni ubunzulu bayo. Ukuba kugqitywe kakhulu kwaye iinqwelomoya azisenakwenzeka, baya kuthi ... kunini apho isigqibo sonke singakhange siyibone isiza. Ibinzana elililo lelo ke ... Besingafuni nokuyibona isiza. Ayizukubakho, ndicinga ukuba kukho izilumkiso ezaneleyo.
14 Novemba 2019 kwi-19: 06
Kufuneka siqhele into yokuba amapolisa anokuhlasela naphina. Unogada kakhulu kwaye uhlala enesizathu esivakalayo sokuba .. Okanye kukho ubugrogrisi kuloliwe okanye umntu ovela eMocro Mafia .. I-Grapperhaus iya kuza kwakhona (ngasemva kohlobo lwayo lwe-65 yakudala yendabuko yase-mpuma yeeglasi) ngesizathu esisekwe kakuhle:
14 Novemba 2019 kwi-19: 16
Ndiyoyika i-porn .. Amaqhinga eGladio. Iimfazwe ezingapheliyo soxolo olungapheliyo. Bayeke batyhale abo bafana, ilizwe lethu liphuculwe. Besiya kuba phi ngaphandle kwabo?
15 Novemba 2019 kwi-21: 53
Okungakumbi! Ngakumbi amapolisa kuba ayimfuneko ngokwenene !!
14 Novemba 2019 kwi-10: 56
Kwaye awukwazi ukuphuma kamva ...
15 Novemba 2019 kwi-11: 25
Ewe, sisicwangciso eso, ngoku ngu-EUROGENDFOR kunye noVon der Leyen endaweni yakhe njenge-Verteidigungsministerin yangaphambili. IMacron, iTusk kunye nabanye oopopu abasuka kwiPolitburo ababuza ngolwakhiwo lwangoku lweNATO njl njl
Wir kämpfen: für Deutschland! Kwaye enye enkulu yeYurophu (funda iNine Reich)
14 Novemba 2019 kwi-16: 05
Njengoko ndiyibona, sele sikwisikhundla sobuzwilakhe, sikwarhulumente. Yiya ngoku ubone amalungelo akho abizwa ngokuba ngamalungelo, umqondiso wegama lokuphakamisa amagama, ukubiza amagama, inkululeko yokuthetha, umzekelo. Uya kufumanisa ukuba awunakukwazi ukuxela iinyani. Kwaye ukuba ume phambi kwenkwenkwe evela kwiskripthi, ke ilungelo lakho liya kuphulwa ukuba isiphumo asihambelani namakhwenkwe, ungqubano kunye nemigaqo-nkqubo yabafana. Umshicileli akamenywanga ukuba kufuneka ugqunywe. . Kukho izigwebo ezingenakubalwa zamakhwenkwe avela kumgwebi weskripthi angachanekanga enyanisweni nasemthethweni. Obu bugqwetha, oko kukuthi, ukungqubuzana, hayi isiqinisekiso esisemthethweni. Amakhwenkwe asuka kumagqwetha eskripthi ayazi ukuba nawo, kodwa ayinxalenye yalawo makhwenkwe avela kwimo ebhaliweyo eshicilelwayo kwaye nawo afumana imali. Yintoni onokuyenza malunga nabafana abavela kwizitatimende zeskripthi. Kwisibongozo, ukuhanjiswa? Ngoobani odibana nabo apho guys abavela script abagwebi. Zama iNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu eStrasbourg. Ewe, ikwangabafana abasuka kwiskripthi. Kwaye yonke into igqitywe ngabo benesikhombisi nokuba kungokwenzuzo yabo. Ukuba uzisa inkqubela phambili kwinkwenkwe evela kwiskripthi kwelinye iqela, ngokuqinisekileyo uya kulahleka. Oko ngenene kuyinyikima malunga noluntu oluqhelekileyo ngenxa yamakhwenkwe.
14 Novemba 2019 kwi-16: 39
Ndiyavuma ... kwaye kubaluleke ngakumbi ukubona kuwo onke amacandelo enkohliso. Yaba lencwadi.
14 Novemba 2019 kwi-16: 53
UDade uNahomi Hoogeweij akanakulinda ... Olu hlobo lweziko linesibongozo kubahlali, iindlela zokuziphatha kunye nokuphambuka okufanayo.
14 Novemba 2019 kwi-18: 49
Ngaba ayingomsebenzi omnandi kakhulu lowo? Ubuza ntoni? "Kukhathalelo"! Ngokwenene!
14 Novemba 2019 kwi-19: 50
Iyabhatala kakuhle! Ungayithenga indlu entle? Iimeko ezilungileyo zomsebenzi wesibini kunye nokunye.
14 Novemba 2019 kwi-20: 02
Ewe, andiyiqondi loo nto! Inkonzo e-madurodam ngumqeshi olungileyo, akukho nto inokukhathazeka ngayo 😀
5 Disemba 2019 kwi-01: 28
Bukela kule vidiyo indlela ilizwe laseTshayina likwabonelela ngcono ngamaziko alo okhathalelo (iinkampu zemfundo ephindaphindwe)
14 Novemba 2019 kwi-19: 52
"Ukhathalelo lwenkcubeko" ayisiyondawo entle uNahomi Hoogewij nayo? Inento yokwenza ne-trans ..
14 Novemba 2019 kwi-20: 25
Njengoko uchaza kwincwadi yakho, kukho uthango olujikeleze imvelaphi ukusuka ekuqaleni (kweli lizwe lithetha kabini). Yonke into yenzeke ngaphambili, siyayibona isiza iimayile ngoku. Ayizonto zodwa ezakhiweyo, njani malunga nenkqubo ye-visa durations? Zonke ezi zinto zihlengahlengisiwe kule minyaka idlulileyo ukuze kube nzima kakhulu ukuba kube nzima ukuba kude. Uqala ngerhafu yokubhabha kwaye inyathelo elilandelayo liyala.
Njengoko uZonnetje esitsho, kusekwe kukoyikwa kwe-porn. Nokuba basifaka kweyona ndlwana incinci incinci, okoko kwasekuqaleni kwethu kusazi ukuba sikhululekile, yonke into elapha emhlabeni.
Ngapha koko, ndikhetha ukuba bandibeka kwikheji kunelo ndibeka umntu kwikheji. Lowo ngumahluko phakathi komntu okhokelwa leli lizwe okanye ngowakhe umqobo!
Ukuba woyisa apha, uya kuphakama ngaphezu kwayo yonke into.
14 Novemba 2019 kwi-22: 31
Hayi, sonke siphambene. Urhulumente ukho ukukhusela abemi bakhona. Kwaye qho emva koko uyaphumelela. Ukuqiniswa okulandelayo kwemithetho nemigaqo kusenzelwa ilungelo lokuba ngummi ...
15 Novemba 2019 kwi-00: 02
Haha ewe ngokuchanekileyo .. eneneni kuyinto enomdla! Ifilimu engalunganga ye-b ihlala iqhuba kakuhle phantsi kwesixuku.
Marga wabhala wathi:
15 Novemba 2019 kwi-07: 32
@ Ilanga, ulibekile kwaye ulungile ngokupheleleyo.
Sonke siyayibona into eyenzekayo, kodwa njengommi nje awukwazi ukwenza okuninzi ngayo.
Singathatha isigqibo sokungabi ngumboneleli-zitho, singavoti, singenzi umsebenzi owenzakalisa omnye kwaye loo nto imalunga nawo ..
Inkcaso, ukumangalelwa, kwisibheno ,? Umthengisi uhlola eyakhe inyama, egqiba ukuba ihlawulwe.
Awuqali kwanto ngokuchasene nabantu abasuka kwiskripthi.
15 Novemba 2019 kwi-07: 46
Ndingathi: ixesha lokufunda incwadi kwaye uphinde ubone ukuba ikhangeleka ikhanya ngakumbi kunokuba ucinga. Ngokwenyani unokwenza into!
15 Novemba 2019 kwi-12: 34
Endikhe ndachaza malunga namakhwenkwe kwisikripthi asinyani siyinyani. Ngokuqinisekileyo oku akuthethi ukuba akukho nto inokwenziwa ngayo. Qala ukufumanisa ukuba kukho into engalunganga, ukungachaneki, ukungabikho kokusesikweni kunye nokungekho sikweni. Yiva iimvakalelo kwaye ungazicinezeli. Gcina ingqondo yakho kuyo. Ungavumeli iimvakalelo zakho zikoyike. Abafana abazithandi iimvakalelo, zonke kufuneka zixinzelelwe loo mandla, ukuphefumlelwa. Bahamba ngenxa yokucacela. Ukuba kukho into ethethiweyo okanye yenziwe, naphi na okanye komnye umntu, zama ukufumana ukuba ulwazi luvela kwimithombo yamakhwenkwe kwisikripthi. Yenza okufanayo nakubantu oqhubana nabo kwaye uzibuze, oku kukodwa kwanabo bafana. Zama ukwazisa abantu abanentliziyo efanayo, enye nganye, kwaye rhoqo uphefumlelana kwaye uchaze ukuba kutheni sikule meko sikuyo. Lumka ke kuba amakhwenkwe nawo azimilise okwengcinga-nye! Ziyimbutho efanelekileyo.
Kuninzi okunokuthethwa ngabo kodwa bafunda kule ndawo.
19 Novemba 2019 kwi-00: 17
Omnye umzekelo omkhulu wengxaki, impendulo, isisombululo.
Iimpawu ezi-oh kangaka ezihlazayo ngexesha lomdlalo webhola zixelwa ngokubanzi kwiindaba. Umdlalo wePRS uyathethwa kumphefumlo omnye.
Ingxaki: ziyaqhawula kodwa azichongwa ukuba ngubani kanye kanye
Senzo: hlazo! Abo bantu kufuneka bagwetywe!
Isisombululo: yazisa ukwamkelwa kobuso kwimidlalo yebhola
Jonga ukusasazwa kwenkqubo "enye namhlanje" ye-18-11-2019 ukusuka kumzuzu we-4 apha ngezantsi: 20
Ngaba kungayinto enokwenzeka ukuba isinxibo "sengcali" sandikhumbuza igorila? Ndisakwazi ukuyixabisa le jokey ehlekisayo :-p
« URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo
I-UN manifesto '90 ibonisa: imozulu yemozulu eyenzelwe ukuphumeza urhulumente wehlabathi »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.659.809
Ikhamera 2 op Ingcinezelo ebakho ebantwaneni inkulu!
UMartin Vrijland op Umcebisi wezopolitiko uphakamisa ukwakha iinkampu zokufunda kwakhona!
guppy op Umcebisi wezopolitiko uphakamisa ukwakha iinkampu zokufunda kwakhona!
Ilanga op Umcebisi wezopolitiko uphakamisa ukwakha iinkampu zokufunda kwakhona!